Momba anay - Shenzhen Joint Technology Co., Ltd.
matihanina amin'ny R&D sy ny famokarana bobongolo fanodinana sy ny milina faritra fikarakarana fitaovana, novolavolaina avo lenta sy ny haitao teknolojia fikarohana, fampandrosoana, orinasa mpamokatra entana, ekipa serivisy sy ny fitantanana rafitra, ary nanitatra vokatra mihoatra ny 11 andiany avy milina fikosoham-bary, ho milina foibe, mekanika sandry, mandeha ho azy. Miaraka amin'ny vokatra miavaka tsara sy ny lazan'ny marika miavaka, ny vokatray dia amidy amin'ny tanàna mandroso 40 manerana an'i Chine, ary koa any amin'ny firenena mihoatra ny 20 eran'izao tontolo izao manerana an'i Azia, Eropa ary Amerika.
Ny orinasanay dia mandray ny vokatra avo lenta ho toy ny orientation, ny hevitra R&D dia ny fanomezana ny mpanjifa ny vokatra kalitao mety indrindra, lasa mpanamboatra fitaovana milina matihanina miaraka amina vokatra vita amin'ny bobongolo sy ny fitaovana fanodinana ampahany ary ny fahaizan'ny famolavolana matanjaka natao tany Shina. .
● Tombony kalitao: fizotran'ny kalitao manara-penitra sy antsipiriany ary fomba fiasa fanaraha-maso, haitao avo lenta momba ny famokarana, rindrambaiko finday avo lenta ary fitaovana finday avo lenta - hahazoana antoka fa hamatsy vokatra tsara.
● Tombony amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana: 20 taona mahery ny fanarahana ny fikarohana lalina sy ny rotsak'orana teknolojia - dia namorona toetra mampivoatra tsara kokoa ny fampitaovana ankapobeny, manamboatra fitaovana haingana sy mahitsy ary manome fitaovana sy fampiharana ny vahaolana feno.
Patanty famoronana, patanty modely ilaina, zon'ny mpamorona lozisialy am-polony
● ERP, CRM ary rafitra fitantanana fampahalalana marobe hafa - hahazoana antoka fa miasa mahomby sy manatsara hatrany ny orinasa.
Omeo mpanjifa vokatra azo ampiharina
Omeo ny mpanjifa ny fanohanana ara-teknika fampiharana ny vokatra CNC, ao anatin'izany ny fanamarinana ny vokatra, ny fandefasana fandaharam-pandrosoana, ny famolavolana sy ny famokarana.
manome ny mpanjifa lasitra na ampahany manamboatra drafitra fampifanarahana ny zavamaniry manontolo, ao anatin'izany ny drafitra fikapohana ny ampahany, ny fampifanarahana ny fitaovana.
Omeo vahaolana ho an'ny mpanjifa ny tsipika famokarana mandeha ho azy, ao anatin'izany ny automatique automatiquement, ny automatéloading et unloading, ary ny automation transmissions material.